Kani waa maqaal ku saabsan fungiga. Boga "fungus" halkan ayaa laga soo toosiyay.
Fungi ( ama fungus; ; loogu dhawaaqo: /ŋɡəs/ ama /oʊti.ɨnz/) waa koox ka tirsan noolaha kuwaasi oo inta ugu badan ka samaysan walax hal-unugle ah. Fungiga waxaa ka mid ah yiista iyo dhamaan walxaha wax lagu khamiiriyo. Guud ahaan, noolaha Fungigu wuxuu mid ka yahay shanta boqortooyo ee dhamaan noolaha; sida dhirta, xayawaanka, brotistaha iyo bakteriyada.
Dhowr nooc ka mid ah walxaha Fungiga
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Fungi&oldid=218855"
Last edited on 9 Oktoobar 2021, at 16:06
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 9 Oktoobar 2021, marka ee eheed 16:06.